Candy · Desambra 2013 · Global Voices teny Malagasy
Candy · Desambra, 2013
Lahatsoratra farany an'i Candy tamin'ny Desambra, 2013
GV Face: Tapaka Ny Faribolam-Baovao. Afaka Hitsabo An'Izay Ve Ny Fanaovan-Gazety Famahana Olana ?
Hevitra27 Desambra 2013
Ahoana moa raha mahatonga antsika ho olom-pirenena mavitrika kokoa ny vaovao, mba hanana akony amin'izao tontolo izao?
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana22 Desambra 2013
Antso an-dahatsary: Ny tsy fantatrareo mikasika ireo toerana izay niavianay
Hevitra22 Desambra 2013
Ho an'ny hetsika famaranana ny taona 2013 dia nangataka ireo mpikambana ao amin'ny fianakaviamben'ny Global Voices izahay mba hanome anareo ireo antsipirihany marina mikasika ny firenen'izy ireo.
“Tour Builder”, tolotra hafa an'ny Google tsy azo ampiasaina any Kiobà
Amerika Avaratra22 Desambra 2013
Manamafy i Google fa ny fanapahankeviny dia mifototra amin'ny fandraràna ara-toekarena ataon'i Etazonia amin'i Kiobà.
Eoropa Afovoany & Atsinanana10 Desambra 2013
Manenjika ny mpisolo vava Tsetsena iray ny Kaomity Mpanadihady Rosiana noho ny kolikoly tamina raharaha iray, manavotra izany ny filoha Tsetsena Ramzan Kadyrov.
Tsy misy Fahamarinana mikasika ilay Mpanao Gazety Rosiana Voadaroka
Eoropa Afovoany & Atsinanana05 Desambra 2013
Voadaroka tamin-kerisetra ary efa saika maty mihitsy ny Mpanao Gazety iray Oleg Kashin, telo taona lasa izay, noho ireo lahatsoratra ara-politika nataony. Mbola mandehandeha malalaka foana ireo nahavanon-doza.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana01 Desambra 2013
Nanmafy ny Qatar's Court of Cassation, fitsarana tao Qatar ny amin'ny fampidirana am-ponja ny poeta Muhammad Rashid al-Ajami ho 15 taona an-tranomaizina. Ny helony ve? " Ny Fandrahonana Hanongam-panjakana" tamin'ny alalan'ny tononkalony.